Kuyini isidleke futhi iluphi ulwazi lwe-geological olufundisayo? Isimo Sezulu Senethiwekhi
A priori, umqondo we imbrication Kungase kungazwakali njengothile kuwe. Siya emkhakheni we-geology okukhona kuwo izenzakalo ezahlukahlukene ezingaqhubeka ngokuqhubekayo futhi zisinikeze imininingwane eminingi. Masizibeke ezinhlakeni zezakhiwo ezisemadolobheni. Kulapha lapho sithola khona ukuhlangana kwama-conglomerate. Lezi zakhiwo zinomqondo onelukuluku futhi zingasinika imininingwane yezemvelo. Imbrication inezifundo zezidalwa ezivela ku I-Cenozoic futhi kungasiza kakhulu ukuthola imininingwane yokwakheka komhlaba yendawo ethile.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngokufaka izidleke.
1 Kuyini isidleke
2 Ungasibona kanjani isidleke
3 Imininingwane yama-clasts afakiwe
Isidleke asisilutho nje sedimentation eyenzeka ezinhlelweni eziphansi nangaphansi zamandla omfula. Ukuzimisela kwayo kuhlose ukwakhiwa kabusha kwezwe, ukuvimbela kanye nokunciphisa izingozi ezilethwa izinqubo ezithile zangaphandle ezindaweni zezwekazi. Ukuze ufunde lesi sidleke, irekhodi le-stratigraphic liyadingeka lokho Kuyasiza ukuqonda zonke izehlakalo zokwakheka komhlaba ezenzeke kuleyo ndawo efanayo.
Lokhu kuhlangana kwama-clast noma ama-conglomerate kungasinikeza imininingwane eminingi ebalulekile yokuthi inhlabathi ethile yakheke kanjani. Singasho ukuthi lesi sidleke ukuhlelwa kwamabhulokhi angaphakathi kwendle o nokuthi kubangela ukuthi izimbazo ezinkulu zibekwe cishe ngokulingana nangengxenye ethile enezingqimba ezikhomba ohlangothini lwamanje. Njengoba sishilo ngaphambili, yizidalwa eziguqulwe isenzo sendlela yomfula.
Ukuze sikuqonde kangcono, sizonikeza isibonelo sokugeleza kwamanzi okuthwala izinto ezithile ezilingana no-gravel noma ezinkulu njengomthwalo ongezansi. Siyakhumbula ukuthi ekuthuthweni kwezidalwa singathola izinhlobo eziningana. Owokuqala wawukhasa: kungukuthuthwa kwezidalwa ezinkudlwana ezihamba kancane ezingeni lomhlabathi ngokukhasa. Okwesibili kwakungusawoti: usawoti kwakuwukuthuthwa kweziduli ezincane ezisindayo ngokwanele ukuthi zazingazungeza kuphela ngokugxuma okuncane.
Ekugcineni saba nezinhlobo ezimbili zokuhamba zalezo zinhlabathi ezincane. Esinye kwakuwukushintshwa kwezimpawu kanti esinye kwakuwukuhlakazwa. I-Flotation, njengoba igama layo liphakamisa, ukuthuthwa kwento ethile ngokuhamba emanzini. Ukuqedwa ukuthi izinhlayiya zincane kakhulu ukuthi ziyoncibilika emanzini.
Lokho kusho, sikhuluma ngokudalwa kwesikhumba lapho Lo mthwalo ongezansi ulingana negravel noma ngaphezulu. Lezi zingxenyana zine-eksisi ende ukwedlula ezinye, ngakho-ke lapho amandla wamanzi ephelelwa ngamandla, ahlala abekwe ezansi futhi abekwa endaweni ezinzile ye-hydrodynamically.
Ungasibona kanjani isidleke
Kuvela ukuthi izinsalela ezihanjiswa ukugeleza kwamanzi zibekwa endaweni ezinzile kakhulu. Ukube amaklasikhi abebekiwe ngokuthambekela okuphikisayo, kungenzeka ukuthi amandla afanayo abengaphinde awagudluze. Ngokwazi ukugqagqana, kungasisiza ukuthi sazi ukuthi emithambekeni ethile nakwi-geological morphology kwakukhona inkambo yomfula esikhathini esedlule.
Umphumela wokubekwa kwama-clast ekuthambekeni komfudlana wenza kukhona ukupakisha kwezinto ezibonakalayo okuyisici impela.
Uma sibona ngeso lengqondo indawo eyehlelayo lapho kube khona inkambo yomfula singabona lezi zici ezilandelayo:
Ukulandelana kwama-clast nezinto ezihlukanisiwe ngokuvamile kunokulandelana okwehlisa okusanhlamvu. Lokho wukuthi, ama-clast amakhulu asondelana ndawonye ezansi kunalawo asondele phezulu. Lokhu kungenxa yokuthi amandla enkambo yomfula awanamandla kangako ukuthi angakwazi ukuhambisa izidalwa ezinkulu aye nazo phezulu.
Singathola isikhala esincane kakhulu phakathi kwama-clast amabili, ngakho-ke kuyaqondakala ukuthi anesibalo esincane kakhulu. Lokhu, ukuthi izinto zibekiwe ndawonye.
Imvamisa imiphetho iyindilinga kahle ngoba amanzi abelokhu egugula ingxenye enkulu yawo. Kuyaqabukela ukuthola imiphetho ebukhali.
Njengoba ama-clast efakwa emanzini, singawathola enokuthambekela ohlangothini olufanayo okuyilo oluveza umkhondo wamanzi asemfuleni.
Imininingwane yama-clasts afakiwe
Konke lokhu kuhlaziywa kwama-clast abekwe ngendlela ethile kusinikeza imininingwane eminingi ngokuthi lezi zinhlabathi zafakwa kanjani. Into yokuqala ukucabangela ukukhethwa kwamasayizi kanye ne-stratification ecacile ebonwayo. Lokhu kukhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi abantu bezokuthutha babegeleza ngokweqile. Uma amahlumela nawo eyindilinga, kukhombisa ukuthi inkambo yomfula yayinamandla kakhulu futhi yinde.
Ukuhlangana kwama-clast kuveza umkhondo wokugeleza kwenkambo yomfula. Ngokwazi ukuqondiswa kwezidalwa ezibekiwe singazi ukuthi ukugeleza kwamanzi bekuhola ngakuphi. Ukulandelana kwezidalwa ekunciphiseni kwesimo sokudla okusanhlamvu kukhombisa ukuthi umfula wawulahlekelwa umthamo wezokuthutha ngokuhamba kwesikhathi. Kubuye kuphakamise ukuthi kube nezenzakalo ezithile zezikhukhula ezihambise impahla ebabayo futhi zamba imigudu emincane phakathi kosilika besihlabathi bamadiphozi adlule.
Uma sibheka kahle, ama-conglomerate axhumene nakho konke ukwehluka kwesimo sezulu namathoni okwenzeka ngokuhamba kwesikhathi. Futhi ekuhlanganisweni kwakho kokubili. Izinqubo ze-Tectonic zibhekele ukwakhiwa kwamagquma, ukuphakamisa nokucwila kwezindawo ezikhawulelwe ngamaphutha. Kodwa-ke, imiphumela yesimo sezulu iyona edala lawa mathafa anenala kanye nokwanda kwamabhange emifula.
Njengoba ukwazi ukubona, ngenxa yokuxhuma kwama-clast singathola ulwazi oluningi mayelana nokuthi yini eyayikhona kudala. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokufaka izidleke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Kuyini isidleke
Konke mayelana ne-galena yamaminerali